မြန်မာ့ဆည်မြောင်း တာတမံတွေ ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းလို့ ငလျင်ဒဏ် မခံနိုင်
မြန်မာ့ဆည်မြောင်း တာတမံတွေ ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းလို...
14 พ.ค. 2562 - 11:35 น.
မြန်မာနိုင်ငံက ဆည်မြောင်းတာတမံတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အနေအထားကို တွေ့လာရပြီး ငလျင်လှုပ်တဲ့အခါ ကျိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လည်းဖြစ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မိုးကုန်ပိုင်းက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဆွာချောင်းတမံ ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် ဒေသခံ တော်တော်များများ ရေဘေးသင့်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆည်တမံ အားလုံးရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကို အသေးစိတ် လိုက်လံ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဒီလို စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝန်ကြီးက ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ဆည်တွေဟာ ငလျင်လှုပ်ရင် ပေါက်နိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ တွေ့တဲ့အတွက် ဆည်တွေ ကျိုးပေါက်တဲ့အခါ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ အမြန်ဆုံး လုပ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့ ဝန်ကြီးက ဆိုပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ တောင်နဝင်းဆည် အခြေအနေ အရ ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ သင်တန်းတွေပေးတာ ပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ ဇာတ်တိုက် လေ့ကျင့်တာတွေ လုပ်ထားပြီးပြီလို့လဲ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဆည်တွေထဲမှာ လွတ်လပ်ရေး မရခင်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဆည်တွေရှိသလို အများစုကတော့ တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေပါ။
ဆည်တစ်ခု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ၅ နှစ်ခန့် အချိန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့ရသော်လည်း တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဆည်အများစုဟာ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်နဲ့ ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရပြီး တစ်ချို့ လုပ်ငန်းခွင်တွေကို ညပိုင်းလုပ်ရတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ ပိုအားနည်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါအပြင် တစ်ချို့ဆည်တွေဟာ ဆည်မဆောက်ခင် လေ့လာမှု အားနည်းခဲ့တာ ဆောက်တဲ့အခါမှာလဲ အမြန်ပြီးအောင် ဆောက်ခဲ့တာတွေ ထိန်းသိမ်းမှု ပိုင်းမှာလဲ အားနည်းချက်တွေ ရှိတဲ့အတွက် ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်နိုင်တယ်လို့ ဆောက်လုပ်ရေး ပညာရှင်များက သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာ့ဆည်မြောင်း တာတမံတွေ ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းလို့ ငလျင်ဒဏ် မခံနိုင်